Kora xiqqaan miseensotaa gaggeeffame; Guyyaan Gootota Oromoos kabajame. – Oromedia
Home » Uncategorized » Kora xiqqaan miseensotaa gaggeeffame; Guyyaan Gootota Oromoos kabajame.
(Oromedia, 9 Caamsaa 2017) Kora xiqqaan miseensota ABO kutaa Scandinavia gaggeeffame; Guyyaa Gootota Oromoos Magaalaa Oslo keessatti kabajame.
Kora kana irratti gabaasa hojii walii galaa dhiyaate, miseensotaan caqafamee, mirkaneeffamuunii fi dhimmoota jaarmiyaa irratti mariin bal’aan gaggeeffamee jira.
Kora kan irratti I/H ABO J/Dhugaasaa Bakakkoo bilbilaan ibsaa bal’aa haala qabsoon bilisummaa Oromoo ABOn gaggeefamaa jiru, haala gaanfa Afirkaa keessatti jijjiraa jiru, rakkinoota uumatni keenyi keessa jiru miseensotaaf ibsa gadifageenyaan kennani jiru.
Ibsa kenname irratti hunda’uun gaafii hedduun miseensotaan irraa dhiyaatee, deebbii quubsaa kennameen miseensota kan haamlachiise fi miseensonni cichoominaan qabsoo itti jiran daran akka cimsan kan kakaase dha.
Haaluma walfakkaatuun, Guyyaan Gootota Oromoo kan bara 2017 Oromoota Oromiyaa fi hawaasa Oromoo addunyaa mara keessa jiraataniin kabajamu, Ebla 29, 2017 haala oowwaa taheen bakka Hogganooti, Qondaalotii, Miseensoonni ABO, deeggartootni fi hawaasni Oromoo hedduminaan argamanitti magala Oslo keessatti yaadatamee oole.
Kabajaan Guyyaa Goototaa kun yaadannoo Goototaaf taasisuun kan eegale yeroo ta’u, faaruu Alaabaa fi Faaruu Goototaas faarsuun itti fufe. Itti aansee akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddoo itti aansuun walga’iin Dr.Dhugaasaa Namee, Dura ta’aa Kutaa ABO Scandinavia tiin sirnaan baname.
Itti fufuun MGS-ABO fi gaaftamaan Damee Siyaasaa fi Jaarmiyaa J/Jabeessaa Gabbisaa duubbee seenaa guyyaa yaadannoo Goototaa; akkamitti akka egale fi maaliif akka kabajamu bal’inaan erga ibsee booda, Guyyaan kana kan yaadannuu Oromoota bilisummaa fi mirga abbaa biyuummaa isaaniif falmaan kan gariin maqaa beekaman gariin kan maqaan isaani hin beekamne hunda akka ta’e ibsanii jiru. Akeeka jaallan keenyaa fi ilmaan Oromoo irratti wareegamaa jiran galmaan ga’uuf Oromoon yeroo kamuu caalaa ijaaramuun falmachuu akka qabu waamicha dhiyeessani jiru.
Itti aansuun J/Lammii Beenyaa Akeeka Gootoonni Oromoo wareegaman galamaan ga’uuf sochiin Qeerroon Oromoon maal irra akka jiru fi akkasumas haala yeroo ammaa itti fufiinsi Qabsoo wareegamni qeerroo Oromoo QBO sadarkaa maal irra akka gahe yaadaachiise jira. Wareegamni Qeerroo godhaa jiru ilaalchisee haasaa nama onnachisuu fi haala QBO keessa jirtu bal’iinaan hawaasaf dabarsee jira.
Akkasumas itti fufuun Dr.Rundaasa Isheetee Oromoon biyya alaa keessa jiru afaan fajjii fi burjaajja’uu siyaasaa keessa ba’ee akka akeeka ilmaan Oromoo wargamaniif maal gochuu akka qaban muyxannoo qaban irraa ibsa bal’aa kennani jiru. Dr. Rundaasaan dhaamsa isaanii keessatti ilmaan Oromoo dhaabbii isaanii sirreefachuu, jette jettee fi quba namati qabuu irraa of eegachuu akka qaban gadifageessanii dhaamani jiru. Walgahii Guyyaa seena qabeessa kana irratti hirmaattootni walgahichaa gaaffii, yaada QBO fuldura tarkaanfachiisu walduraa duban dhaamatanii jiru.
Itti dabalee Guyyaa Yaadannoo kana irratti J/Elemoo Ali Canda irraa kan argamaniif akeeka jaallanii fi dhaloonni Oromoo biyyaa keessa wareegamaa jiraniif galmaan ga’uuf sochii WBO gochaa jiru ibsuun Oromoon waan danda’uun qabsoo isaa cinaa akka dhaabbatan waamicha taasisee jira.
Waamicha J/Elemoo irratti hunda’uun gumaachi addaa Hawisoo WBO kan oolu taasifamee jira. Gootota keenya yaadachuuf qophii galgala aadaa qophaa’ee irratti Artistoonni Oromoo: Elemoo Ali, Ilfeenshe Qannoo, Bohaarstuu, Haayiluu Kitaabaa, Tottobaa Taddasee, Joon Abatee, Danga Hayileyesus argamuun Hawaasa bashanansiisa bulaniiru.
Previous: Addi Bilisummaa Oromoo Finfinneen dachee Oromoo fi handhuura Oromiyaa tahuu ammas irra deebi’ee ibse.
Next: Muka Dhaabaa:Eessayyuu yoo jiraattan, muka dhaabuu waanti si dhorku hin jiru!